कुन राशिका महिलालाइ धेरै चाहिन्छ ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Enepali Samchar
e nepaalisamchaar// यो पनि पढ्नुहोस: जन्मदै दुई खुट्टा गुमाएकी २ सन्तानकी आमा, जुना लिम्बुको संसारलाई रुवाउने कथा (भिडियो हेर्नुस्) : जुना लिम्बूको जन्मने बितिकै दुइओटा खु`ट्टा थिएनन । उनी अहिले २६ वर्षकी भएकी छिन । उनका श्रीमान ३३ वर्षका छन । तीन जना दिदिहरुको लगातार मृ`त्युु पछि कान्छी छोरिको रुपमा उनको जन्म भएको थियो । ग`रिबिको रेखामुनी जन्मिएकी जुनाको जन्मदानै दुबै खु`ट्टा गु“मेको रहेछ क`ठै विचरा !
सन्सारकै अनौठो यो जोडि छोरिहरुलाई धेरै पढाएर ठूलो मान्छे बनाउन चाहन्छन । आफुले जस्तै कुटो कोदालो र बारिका पाखाहरु नकुदोस भन्ने चाहन्छ ।छोरिहरुलाइ पढाएर देशको सेवा गर्ने होस भन्ने चाहन्छ । उनिहरुको सपनाहरू पूरा हुन । यो महान जोडिलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ ।दु`ख नपाओस यो जोडिले।
एसईई र कक्षा १२ को विद्यार्थी हरुलाइ खुसिको खबर बोर्डले गर्‍यो यस्तो निर्णय
मध्यरातमा महन्थ ठाकुरको झड्का ! राजनीतिमा नयाँ हलचल
श्रीमानका यी साना साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती
जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ भने मोटी युवतीसँग विवाह गर्नुहोस्: यस्तो आयो अध्यनको निष्कर्स